सरी डा.शशांक कोइराला, म तिमीलाई भोट दिन सक्दिन् ! - Dainik Nepal
सरी डा.शशांक कोइराला, म तिमीलाई भोट दिन सक्दिन् !
दैनिक नेपाल २०७४ मंसिर १७ गते २२:०३
– माधब भुसाल
मलाई लाग्दैन कि डा.शशांक कोइराला हार्छन् । यो पनि लाग्दैन, उनको जितमा मेरो क्षेत्र नवलपुरले मुहार फेर्छ । पार्टीप्रति आस्था भएकाहरु शशांकलाई जिताउन चाहँदैनन् । कांग्रेसलाई जिताउन चाहन्छन् । निराश छन् उनीबाट । स्वयम् उनका लागि मत माग्ने कार्यकर्ता अनि सिंगो क्षेत्रका स्थानीयहरु ।
बीबीसीको साझा सवालमा उनले भनेका थिए ‘मैले चाहेर नहुने रैछ ।’ गैरजिम्मेवार देखिए उत्तरमा । त्यो एपिसोड हेर्दा उनी कुनै एंगलमा पार्टीको महामन्त्री वा जनताको प्रतिनिधि लाग्दैनन् । यो पनि लाग्दैनन् कि उनले आफ्नो क्षेत्रलाई केही गरे, भविष्यमा केही गर्छन् ।
विगतका चुनावमा ‘हेभी’ मतले विजयी भएका हुन् उनी । ‘हेभी वेट’ उम्मेदवार पनि भन्ने गरिएको छ । संसद विकास कोषको पैसा कहाँ गयो ? मैले थाहा पाइनँ । उपलब्धी बारे भाषण गर्दा उनीसँग संविधान बाहेक केही रहेन । संविधान निर्माणमा लागि परे । राम्रो हो । तर, जनताले आँखा अघि देख्न पाउने गरी कुनै विकास निर्माणका कार्य भएनन् । सिंगो क्षेत्रलाई अहिलेनै झलमल किन बनाएनौ ? भनेर प्रश्न गरें भने म गलत हुन्छु । कनिका नै छर्दिएको भएपनि आश लाग्थ्यो मलाई । म जस्ता हजारौं युवालाई । हजारौं युवाका दिदिबहिनी अनि बुवाआमालाई । अहँ आशा जगाउन सकेनौं ।
आफूनिकट रहेका केहि नेतासँगै कार्यकर्ताहरु चिनेका हौला । फोनसम्म रेसिभ हुन्छ होला । तर चुनाव बाहेक अरुबेला तिम्ले, खुट्टा कमाउँदै सकिनसकी लौरो टेकेर रुखमै छाप हान्ने आमाबा लाई चिन्यौ त ?
बेलाबेला आउँछौं । पार्टीका कार्यक्रम हुन्छ । केही संस्थाको उद्घाटन हुन्छ । सम्बोधन गर्छौ फर्किन्छौ । जनताको प्रतिनिधि हौ । तिम्लाई मत नदिने जनता पनि तिम्रै आशमा बसेका हुन्छन् । केही होला नि भनेर । अहँ, भएन ।
दुई पटक जितिसक्यौ । अब पनि जितौला । उही कार्यशैली दोहोरिन्छ अनि ? जनताले के पाए । चुनावको बेला नमस्कार ?
महशुस हुने गरि विकास निर्माणका कामको योजना ल्याउ । कार्यान्वयन गर । आधा भन्दा बढी पैसा बच्छ । जुन तिम्ले चुनाव प्रचारप्रसारको लागी खर्चिरहेछौ ।
विपीले जनताको मन जिते । सबैको सम्मान छ उनीप्रति । महामन्त्री भैसक्दा पनि अझै विपी पुत्र भनेर किन चिनिने ?
मन अमिल्याएर भएपनि शशांकलाई जिताउनुहुन्छ । शशांकलाई लाग्छ कि जनताले उनलाई जिताए । तर वास्तविकता यो हो कि, कार्यकर्ताले पार्टीलाई जिताएका हुन् । आफ्नो गढलाई सुरक्षित राखेका हुन् ।
विपीले जस्तै छाप जनतामाझ तिम्ले बनाउन नसक्ने हो ? वा विपीकै रटान लिएर अघि बढ्ने । सिद्धान्त अवलम्बन गर विपीको । तर तिम्लाई चिनाउँदा वा चिनिदा विपीपुत्र भनेर मात्रै चिनाउने चिनिने कहिलेसम्म ?
मैले मतदाताहरुलाई रुखमा छापै नलगाउनुस् भन्दिन । पुखौंदेखि रुखमा लाग्दै आएको स्वस्तिक छापलाई अरु चिन्हमा लगाउने आँट गर्नु कठिन कुरा पनि हो । मन अमिल्याएर भएपनि शशांकलाई जिताउनुहुन्छ । शशांकलाई लाग्छ कि जनताले उनलाई जिताए । तर वास्तविकता यो हो कि, कार्यकर्ताले पार्टीलाई जिताएका हुन् । आफ्नो गढलाई सुरक्षित राखेका हुन् ।
आजसम्म भएका निर्वाचनमा अपराजित रहेका शशांकको नतिजा यो पटक पनि नदोहोरिएला भन्न सकिदैंन । तर जितसँगै रमाएका र अपेक्षा संगालेका म जस्तै युवाहरु र हजारौं आमाबाहरु तिम्रो कार्यप्रगतिमा मुस्काउन सकेनन् । विकल्प खोज्न सक्छन् उनीहरुले, यसपटक । अनि म पनि तिम्रो कार्यप्रगतिमा मुस्काउन सकिनँ ।
यसअर्थमा विकल्प खोज्न बाध्य भएर भन्दैछु ‘सरी डा.शशांक । आइ कान्ट भोट फर यु !’
लेखक नवलपुर (नवलपरासी) का बासिन्दा हुन् ।
रङ्गीचङ्गी फूल र झिलीमिली गाउँबस्तीको उज्यालो तिहार